Konke okufanele ukwazi mayelana ne-Proviron yokwakha umzimba
Konke mayelana ne-Proviron
I-1.Iyini i-Proviron? Isebenza kanjani? I-2. Isilinganiso se-Proviron
Umjikelezo we-3.Umjikelezo Imiphumela ye-4.Imvelo
5.Vviron isigamu-impilo I-6.Vviron yokusika
I-7.Vviron yokukhwabanisa Izinzuzo ze-8.Proviron
Ukubuyekeza kwe-9.Proviron I-10.Imvelo yokudayiswa
I-11.Imvelo ye-Bodybuilding -Sommary
1. Kuyini i-Proviron? Isebenza kanjani?
I-Proviron igama lomkhiqizo we-androgen ebizwa I-Mesterolone. Lesi yisidakamizwa somlomo esingacatshangwa ukuthi si-steroid ye-anabolic ngenxa yemiphumela yaso ephansi ye-anabolic emzimbeni. Eqinisweni, kubonakala sengathi kunezimo ze-androgenic zero. I-Proviron yasungulwa ku-1934 ngokuhlambalaza ukuyenza phakathi kwe-steroids endala eyenziwe futhi idayiswe ukuze isebenzise ukwelashwa. Isidakamizwa sisekusemakethe ngamagama ahlukene wegama, kodwa i-Proviron ihlale ibusa ngaphezu kweminyaka. Ngakolunye uhlangothi, i-Proviron isengenye ye-steroids engafani kahle. Ungathenga lesi sidakamizwa kusuka ezitolo ezahlukene noma uhlele inthanethi kwiwebsite yethu.
I-Proviron (1424-00-6) i-steroid eyingqayizivele ehlanganyela ngezindlela ezihlukahlukene ezifanayo I-Masteron (Drostanolone), Winstrol futhi Anavar ngezinga elithile. Ngokusebenza kwayo, i-Proviron ayikwazi ukusetshenziselwa ukugqugquzela ukwakheka kwemisipha enkulu, kepha yenza isisindo esibalulekile ekuqeqesheni umzimba. Lokho kusho, i-Proviron isetshenziselwa kakhulu ukusika imijikelezo ngabaningi bomzimba nabadlali. Emhlabeni wezokwelapha, i-Proviron iphakathi kwe-steroid esetshenzisiwe kakhulu emithi yanamuhla. Kodwa-ke, i-Mesterolone kusukela ekuthuthukiseni kwayo akukaze kuvunyelwe ukusetshenziswa komuntu yi-United States of America FDA.
Ukusetshenziswa okuyinhloko kweProviron ezweni lezokwelapha ukuphatha ukukhubazeka kwe-androgenic okuthinta kakhulu endala. Isidakamizwa sisetshenziselwa njengesizo sosizo lokuzala kanye nesandulela-pubescent yamadoda. Lokhu kuphela kwenza i-Proviron i-steroid ewusizo kakhulu ehlinzeka ngemiphumela emihle emzimbeni womuntu. Nakuba lesi sidakamizwa kubhekwa njengemithi endala, sekuyisikhathi sokuvivinya, kanti eminyakeni eminingi iphephile futhi ibekezelela iziguli eziningi. Abakhi bomzimba kanye nabanye abagijimi nabo basebenzisa amakhono omuthi ukuwasiza ukuba bathole imisipha enzima futhi bathuthukise amazinga e-hormone e-testosterone. I-hormone ye-Testosterone idlala indima ebalulekile ekusizeni abagijimi nabazimba bomzimba ekuthuthukiseni ukusebenza kwabo.
I-Proviron yi-dihydrotestosterone etholakala i-anabolic steroid, futhi i-DTH hormone eguqulelwe ngokuhlelwa ngokufaka i-methyl nekhamera endaweni eyodwa. Lokhu kwenza i-hormone isinde ekungeneni komlomo kusukela ivikelwe ekuqhekekeni kwe-hepatic. I-Proviron iphakathi kwezimbalwa ze-anabolic steroids ezingezona i-C17-alpha alkylated, kodwa endaweni yayo, ithwala iqembu le-methyl. I-Oral Primobolan enye i-steroid eyaziwa kakhulu neqembu elifanayo le-methyl. I-Proviron inezinga le-androgenic eliphathelene ne-30 kuya ku-40 nesilinganiso se-anabolic esukela ku-100-150. Ukuhlolwa kwenziwa ngokuqhathaniswa ne-testosterone. Ngisho noma i-Proviron inemaphuzu ephezulu ye-anabolic kune-testosterone, iveza izakhiwo ezingezansi ze-anabolic.
Inzuzo eyaziwa kakhulu ye-Proviron yikhono layo lokusebenza njenge-anti-estrogen ngesenzo sayo njenge-inhibitor ye-aromatase. Amandla we-aromatase inhibitor wezidakamizwa angaqhathaniswa neka-Arimidex, kodwa aphansi kakhulu. I-Proviron nayo inehlolisana ephezulu ye-Sex Hormone Binding Globulin (SHBG), okuyinto iphrotheni elibopha kahle nge-anabolic steroids egazini lakho kanye nokubenza bangasebenzi uma beboshiwe. Ukusetshenziswa kwe-Sustanon 250, ukujikeleza, isilinganiso, izinzuzo, ukubuyekezwa
Ngakho-ke, ukuthatha i-Proviron namanye ama-anabolic steroids kuthuthukisa imisebenzi yayo futhi kukuvumela ukuba ujabulele imiphumela ephezulu. Isidakamizwa sinikeza indlela kanye nemvelo evumelayo ngokusebenzisa indlela eshiwo ngenhla ishiya ubufakazi obuningi obungabonakali nabangenayo ukuze benze imisebenzi yayo. Ukuze uthole imiphumela engcono, kunconywa ukuthi bonke abasebenzisi bahlole ukuhlolwa kwezokwelapha futhi bahilele udokotela kuyo yonke inqubo. Kungakhathaliseki ukuthi imithi iphumelela kanjani, ngezinye izikhathi ingase ingasebenzi kahle nabanye abantu ngenxa yesimo sabo sezempilo noma ubunzima bezinhlelo zomzimba.
2. Isilinganiso se-Proviron
The Isilinganiso se-Proviron kuncike kuzidingo noma izizathu zokuthi kungani uyithatha. Abanye abasebenzisi bayelulekwa ukuthi bathathe imithi encane ngenkathi abanye kufanele bahambe ngezinyathelo eziphezulu ukuze babone imiphumela. Ngokwesibonelo, emhlabeni wezokwelashwa ukwelashwa kwe-androgenicity enganele emzimbeni, i-tablet ye-25mg Proviron okufanele ithathwe ngosuku lwesithathu okusho ukuthi inani le-75 gm nsuku zonke yi-dose ephakanyisiwe. Umthamo wanciphisa kuze kube yi-25mg ngosuku ukugcina amazinga e-Proviron emzimbeni. Ekulweni ukwelashwa kwamadoda, isilinganiso esifanayo sanele ngokwanele ukuletha imiphumela elindelekile. Kodwa-ke, kufanele uvumele udokotela wakho ukuba abeke izilinganiso ezifanele zesimo sakho.
Emakhakheni womzimba kanye nemidlalo, ama-proviron amaminerali aphakeme kunalokho uma asetshenziselwa izinqubo zokwelapha. Lapha ama-dosage avela ku-50-150mgs ngosuku ngosuku lokulawula amazinga e-estrogen noma ukunciphisa amazinga okugcina amanzi emzimbeni. Okokuqala, udokotela wakho angakutshela ukuthi uhambe ngezinyathelo ezingezansi ezingakhuphuka njengoba uqhubeka nomjikelezo wakho. Kubasebenzisi be-hardcore, ama-dosage aphezulu kuphela azoletha imiphumela elindelekile. Ukuzivocavoca nokudla okufanele kudla indima ebalulekile kunoma yimuphi umakhi womzimba noma umgijimi ukuze athole imiphumela ephezulu.
Abadlali bezemidlalo nabadlali bomzimba balisebenzisa ngokunenzuzo lesi sidakamizwa esimangalisayo, nakuba singavunyelwe ukusetshenziswa kwabesifazane. Kubasebenzisi besifazane, lesi sidakamizwa sinikeza imiphumela yekhwalithi, kodwa kufanele isetshenziswe kumasethini aphansi ka-25mgs ngosuku ngemjikelezo kusuka ku-4 kuya kuma-5 amasonto. Izindleko eziphakeme kwabesifazane zingaholela ekuthuthukiseni izici zesilisa ezifana nemisipha, ukukhula kweendevu nokujula kwezwi. Ngokuqinisekile, akekho owesifazane ngisho nabagijimi abangathanda ukuthuthukisa abalingiswa abanjalo ngisho nokugxila ekubeni nomsebenzi ophumelelayo. Uma kunoma yimaphi imiphumela emibi ye-Proviron, udokotela anganciphisa umthamo noma aqede umjikelezo futhi athole isidakamizwa esibekezeleleka esimweni sakho sempilo.
Njengalapho usebenzisa amanye ama-steroids, uma ubona noma yikuphi ukuthuthuka okungahambisani nawo, mema ngomusa udokotela wakho ngokuhamba kwesikhathi. Ngesinye isikhathi ngisho nalapho uhamba ngezinyathelo eziphansi, ungase ugcine uhlangabezana nemiphumela emibi kakhulu. Kuyinto evamile ngoba imizimba yabantu ayifani futhi ezinye ziyinkimbinkimbi kakhulu. Kwabanye abasebenzisi, umthamo wansuku zonke we-25mg ungaba phezulu, kodwa udokotela wakho angathola njalo isilinganiso esifanele izidingo zakho. Abasebenzisi besifazane kufanele futhi basebenzise iProdon nge ukunakekelwa okuningi ngoba ezinye imiphumela emibi ayinakuguqulwa.
3. Umjikelezo we-Proviron
I-Proviron akuyona i-steroid e-anabolic ejwayelekile futhi inemiphumela ebuthakathaka kakhulu ye-anabolic emzimbeni womuntu; ngakho-ke akusetshenzisiwe ngendlela yemigqa. Esikhundleni salokho, lesi sidakamizwa sisetshenziswe njengomkhiqizo owengeziwe noma njengomsizi kwamanye imijikelezo ye-anabolic steroid ukunciphisa imiphumela yokunciphisa i-estrogen emzimbeni wakho. I-Proviron isetshenziselwa kakhulu imiphumela yayo ekhangayo ukuze kuthuthukiswe ukubukeka noma umzimba lapho bonke abadlali noma abadinga umzimba bezidinga khona. Imijikelezo ixhomeke esizathu sokusetshenziswa kweProviron. Iziguli ezithatha lesi sidakamizwa zinemijikelezo emifushane ngenkathi izakhi zomzimba zifaka umuthi nezinye i-anabolic steroid ingaba nemijikelezo emide.
Ngokwesibonelo, iziguli ezithatha izidakamizwa zokwelapha ukungasebenzi noma ukungaqiniseki kwe-androgen zingacelwa ukuthi zithathe isilinganiso sokulinganisa isikhathi. Noma kunjalo, udokotela wakho kufanele abeke isilinganiso esilungile futhi ajikeleze ngemva kokuhlola isimo sakho. Ngakolunye uhlangothi, abakhi bomzimba noma abagijimi abasebenzisa i-hardcore Proviron, ukujikeleza kwabo kuphakathi kwe-8 kuya kuma-12 amasonto. Abasebenzisi abasha be-Proviron ekwakheni umzimba kuzokuqala ngomjikelezo weviki le-8 ngaphambi kokuba udokotela ewelulele ku-12 emijikelezweni elandelayo. Uma kwenzeka, uthatha lesi sidakamizwa ngezinye i-anabolic steroids, uphakamise konke okukhathazayo nodokotela wakho ngaphambi kokuba uqale imijikelezo yakho. Khumbula, ukugcina njalo isilinganiso semiphumela engcono. Ukuthatha imithwalo yeProviron ehlukile kungabangela imiphumela emibi okuyiyona into yokugcina noma yimuphi umsebenzisi wezidakamizwa ongacabanga, wonke umsebenzisi ugxile emiphumeleni emihle. Ngakho-ke, kufanele uhlale unamathele emibhalweni yokusetshenziswa ohlwini ezosisiza ukuba uthole izinzuzo eziphezulu ze-Proviron.
Abasebenzisi be-Proviron besifazane banomjikelezo omfushane ngaphezulu kwezindlela eziphansi. Uma ungumdlali wesifazane noma umakhi womzimba, ungathathi ngaphezu kwe-25mg ithebulethi nsuku zonke, ngaphandle uma utshelwe ngenye indlela udokotela wakho. Imijikelezo yowesifazane yesikhashana futhi iphakathi kwe-4 kuya kumaviki angu-5. Lokhu kungenxa yokuthi ukusetshenziswa ngokweqile kwe-Proviron kwabesifazane kungaholela ekusebenziseni ubuhlungu. Abagijimi besifazane bayakhuthazwa ukuba bahlole ukuhlolwa kwezokwelapha ngokujwayelekile ukuqapha amazinga e-Proviron emzimbeni ngaphambi, ngesikhathi nangemva kokuqedela umjikelezo.
4. Imiphumela ye-Proviron
I-Proviron yisidakamizwa esimnandi nakuba abanye abacwaningi abanjengo-AT Kicman bayibiza ngokuthi i-steroid ebuthakathaka. Kodwa-ke, uma isetshenziswe kahle, lesi sidakamizwa sinikeza imiphumela emihle kubasebenzisi. Njenganoma imuphi omunye umuthi, i-Proviron inikeza kokubili imiphumela emihle nembi kuye ngokuthi uyisebenzisa kanjani. I-Proviron iboniswe ukuthi i-steroid enamandla kakhulu uma isetshenziselwa izinhloso zokwelapha noma zomzimba. Kodwa-ke, ukuze ukwandise imiphumela, udinga ukuthatha isilinganiso esifanele ngesikhathi esifanele bese uhamba neProviron ngokudla okufanele noma ukuzivocavoca ngezinhloso zokwakha umzimba. Nanka eminye imiphumela emihle ye-Proviron.
Thuthukisa amazinga we-testosterone emzimbeni
Lesi sidakamizwa sisetshenziselwe ukwandisa i-testosterone hormone emzimbeni. I-hormone inezinzuzo ezihlukahlukene ezifana nokuthuthukisa ukukhula kwemisipha nokuthuthukisa i-libido yamadoda. Wonke umuntu kudingeka abe ne-hormone ukusiza ukuthuthukiswa kwezici zesilisa ezifana nokujula izwi, nokukhula kwezintshebe phakathi kwabanye. Ngakho-ke, i-Proviron inezici eziyingqayizivele ezenza kube kuhle futhi kube nesithuthukisi esihle se-testosterone. Ezimweni ezivamile, i-hormone ye-testosterone ayisebenzi ngoba i-albin kanye ne-Sex Hormone Binding Globulin (SHBG). I-Proviron enokubambisana kakhulu kwe-SHBG, lapho ithathwa ngokubambisana ne-SHBG, ngaleyo ndlela inikeza i-testosterone inkululeko ephelele yokwenza imisebenzi yayo ngokukhululekile. Kubantu abanesisindo se-testosterone ke i-Proviron yisidakamizwa esingcono kakhulu esingayisebenzisa.
Thuthukisa ubukhulu bemisipha
Ngokuvamile, i-Proviron yandisa imisebenzi ye-testosterone kanye namanye ama-steroids emzimbeni wakho. Lokho kusho ukuthi amaprotheni synthesis azokhuliswa futhi aphinde athuthukise ukukhula kwemisipha. I-Estrogen iba isebenzayo futhi isebenze emzimbeni wakho kuphela uma ivikelwe kuma-receptors e-estrogen. I-Proviron yisidakamizwa esinamandla uma kuziwa ekunciphiseni ikhono le-estrogen receptors emisipha yakho, ngakho-ke, ukunciphisa inani le-estrogen esebenzayo. Ngakolunye uhlangothi, i-Proviron inesidingo esihle kakhulu se-aromatase enzyme esibophezela nge-testosterone kanye nokuyiguqula ibe yi-estrogen.
Umzuzwana, i-Proviron ibophezela nge-enzyme, ivinjelwa ama-hormone e-testosterone ekubophezelweni, ngaleyo ndlela inciphisa amazinga okukhiqizwa kwe-estrogen. Futhi, lo msebenzi uholela ekunciphiseni emakhiweni wamanzi emzimbeni wakho, ngaleyo ndlela unikeze imvelo efanele ukuze imisipha yakho ikhule kanzima futhi ivulekele. Abaningi bezakhi zomzimba nabagijimi basebenzisa i-Proviron ukukhulisa ukukhula kwabo kwemisipha ngakho-ke uma kuhambisana nokudla okufanele nokusebenza kahle. I-Proviron isebenza kahle namanye ama-anabolic steroids, futhi ungayifaka kunoma imuphi umjikelezo we-steroid ngemiphumela engcono. Yazisa udokotela wakho ukukusiza uthole umjikelezo oqondile kanye nenhlanganisela ezokusiza ukuthi uthole imiphumela oyifunayo.
Ukwelashwa kokuntula amandla
Ukungasebenzi kahle kwe-Erectile kuyinkinga ebhekene namadoda amaningi ngakho abaguga kusukela emazingeni e-testosterone behla njengeminyaka yobudala. I-Proviron ithuthukisa amazinga we-hormone ye-testosterone emzimbeni kanye nokuhlinzeka ngemvelo ekwazi ukwenza imisebenzi yayo ngendlela efanele. Kubantu abanezinkinga ezingenamandla, i-Proviron bekuyisibusiso. Isidakamizwa siye saba kuhle kakhulu ekwelapheni izinkinga ze-erectile kubantu.
Ukwelashwa okungahambi kahle
Ukungafanisi kwamadoda kubangelwa inkinga yokukhiqiza izidalwa. Yize kungekho muntu ongachaza indlela yokwelashwa kwesilisa okungokoqobo, izidakamizwa ziye zaqinisekisa ukuthi ukukhiqizwa kwesidoda kuxhomeke kakhulu kuma-androgens amabili afana ne-testosterone kanye ne-gonadotropins enesizathu sokugqugquzela izitho zobulili. Ezimweni eziningi, i-androgens isetshenziswe ama-medicia ukuphatha izinkinga zokungenwa kwamadoda, kodwa ngokuvamile ziyanciphisa izivimbe ze-gonadotropin ezenza ukuthi zingasebenzi ekugqugquzeni ukukhiqizwa kwesidoda. I-Ultimate Guide ku-Stanozolol (Winstrol) ye-Bodybuilding
I-Proviron isebenza ngokugqugquzela i-androgens emzimbeni wakho kodwa ingabi nethonya elincane kuma-gonadotropin. Njengamanje, ucwaningo oluningi luzodinga ukuqhutshwa ukuze lunqume ukuthi ngabe izidakamizwa zingaphinde zithuthukise i-gonadotropin. I-Proviron iyaqhubeka ibe yisidakamizwa esithandwayo ekwelapheni ukungasebenzi komuntu. Amazinga we-hormone e-testosterone athuthukisiwe emzimbeni wakho athuthukisa ikhono lakho locansi kanye namazinga okuzala. Xhumana nodokotela wakho ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana ne-Proviron ekwelapheni kokungasebenzi.
Imiphumela ye-Proviron engalungile
Cishe zonke izidakamizwa zinemiphumela emibi engaba encane noma enzima kakhulu ngezinye izikhathi uma imithi isikhululiwe. I-Proviron nayo ingakuveza emiphumeleni ehlukahlukene, kodwa kufanele usazise udokotela wakho ngokuhamba kwesikhathi. Kwezinye izimo, abasebenzisi be-proviron bangase babe nemilayezo engakwazi ukulimaza imiphumela emibi. Noma kunjalo, ukunamathela emiyalweni kadokotela wakho kungaba yindlela engcono kakhulu yokulawula imiphumela yecala le-Proviron. Eminye yemiphumela emibi ejwayelekile ihlanganisa;
Ukuya ocansini okwandayo kudlula kakhulu kumadoda angenayo inkinga nge-sex drive yabo.
Ukukhulelwa ngaphambi kwesikhathi
Kungabangela ukuphulukiswa kwabesifazane lapho kuthathwa amanani aphezulu.
5. I-Proviron yokuphila kwengxenye
Isidakamizwa sinomzuzu wokuphila mayelana namahora we-12. Iyiphi indlela ngemuva kokuthatha isilinganiselwa sakho sokunene, i-Proviron izohlala isebenze emzimbeni wakho cishe ngamahora angu-12. Ngakho-ke, yingakho umthamo wezidakamizwa uvame ukuhlukaniswa kabili kuya kweyesithathu ukugcina amazinga awo ahlale emzimbeni wakho ngemiphumela engcono. Kungakhathaliseki ukuthi udinga ukufeza ngokuthatha i-Proviron, lokho akuguquli I-Proviron ukuphila okungaphelele. Kwabaqalayo, umthamo we-50mgs kufanele uhlukaniswe kabili futhi uthathe amaphilisi amabili we-25mg kabili ngosuku. I-Proviron inesikhathi sokuthola mayelana namaviki angu-5-6 okusho ukuthi uma uya kokuhlolwa kwezokwelapha phakathi naleso sikhathi; umuthi uzobe usatholakala emzimbeni wakho. Ukuze abadlali abahlanganyele emincintiswaneni engavumeli ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa noma amanye ama-steroids, kuhle ukwenza isikhathi esifanele, ukugwema ukuchitha umsebenzi wakho. Abakhi bomzimba abanenkinga, futhi bangasebenzisa kahle izidakamizwa noma nini futhi bafeze imigomo yabo ebekulindeleke ngemuva kokuqeda imijikelezo yabo yesilinganiso.
6. I-Proviron yokusika
Sekuyiminyaka eminingi manje abagijimi nabazimele bezisebenzisa i-Proviron ukuze bazisize emijikelezweni yabo yokusika nokukhukhumeza. Isidakamizwa sandisa amazinga we-androgen ngenkathi yehla amazinga e-estrogen emzimbeni wakho. Ukusika kwe-proviron kwandisa amaprotheni synthesis kanye nokuvumela ama-hormone e-testosterone ukusebenza ngokukhululekile. Amafutha omzimba okweqile angakuphika ubuhlungu obunzima nobunzima obuthandayo njengomzimba womzimba.
Kodwa-ke, kufaka phakathi i-Proviron emjikelezweni wakho wokusika, ingumqondo ongcono kakhulu ekufinyeleleni imigomo yakho. Ngokuzivocavoca kanye nokudla okufanele, ekugcineni uzokuthuthukisa imisipha enzima futhi encikile. Ukusika amafutha omzimba okweqile emzimbeni wakho kusiza ekuqapheliseni imisipha enzima futhi eqondile ekupheleni komjikelezo wakho. Iningi le-anabolic steroid emakethe liwusizo ekusizeni ukuba uthole imisipha noma amapounds, kodwa ukuze ulandele imijikelezo, udinga ukufaka i-Proviron kumjikelezo wakho wezinyosi. Thintana nodokotela wakho ukukusiza ekwakheni umjikelezo olungile ngezidingo zakho.
7. I-Proviron yokukhwabanisa
Lapha uhlose ukungeza amakhilogremu emzimbeni wakho futhi ukwazi ukuncintisana ngempumelelo. I-Proviron ukukhwabanisa umuthi owaziwa kakhulu ongagcinwa nge-anabolic steroids ehlukahlukene ukuletha imiphumela nemiphumela emihle. Ngakho-ke, uma isetshenziswe yedwa, isidakamizwa singabi usizo kumuntu owenza umzimba ofuna ukuthuthukisa imisipha enzima futhi enamathele futhi wengeze amanye amakhilogremu. Ukwehla i-Proviron namanye ama-steroids ingumqondo omuhle kakhulu kusukela usebenza kahle cishe nawo wonke ama-anabolic steroids. Ungafaka kumthamo wakho okungenani ama-50mgs ngosuku ngosuku lokujikeleza kwakho.
Ukudla okufanele nokusebenza kahle kuzodlala nokubalulekile lapha, ukuze uthole isisindo osidingayo. Ukuba yisidakamizwa ngomlomo kuyodingeka usebenzise usuku nosuku, kodwa kuzosebenza kahle namanye ama-anabolic steroids engenayo. Nakuba abaningi bezinsimbi zomzimba befake i-Proviron emigqeni yabo yokusika, kungaphinde kuhlinzeke imiphumela emihle lapho behilelekile emigqeni yokubhukuda. Abanye abagijimi babika imiphumela yekhwalithi emva kokufaka i-Proviron emigqeni yabo yokukhwabanisa, okusho ukuthi idiliza kanye okubekiwe ngokufanelekile. Khuluma njalo nodokotela wakho ukuklama wena umjikelezo omuhle kanye nesilinganiso semiphumela engcono ye-Proviron bulking.
8. Izinzuzo ze-Proviron
I-Proviron inikeza imiphumela yekhwalithi kubo bonke abasebenzisi bayo futhi inikeza izinzuzo ezihlukahlukene kokubili komzimba kanye nezokwelapha. Ngokwezifundo ezahlukene zesayensi kanye nokubuyekezwa kwamakhasimende, kuyacaca ukuthi isidakamizwa siye sazuza ngezindlela eziningi. Ikhono le-proviron yokwandisa i-testosterone namanye ama-anabolic steroids potency yilokho okubonakala kubasebenzisi abaningi. Kubasebenzisi be-steroid abangenakho ukhululekile ngezijovo ezivamile, i-Proviron inikeza imiphumela oyidingayo ngokusebenzisa umthamo womlomo. Nazi ezinye ezibalulekile Izinzuzo ze-Proviron;
Kusukela kutholakala kokuqala ku-1934, i-Proviron bekuyisidakamizwa esihle kunazo zonke ekwelapheni ukungasebenzi nokusebenza kabi kwe-erectile. Izinkinga ze-Erectile zibangelwa amazinga aphansi e-testosterone hormone emzimbeni. Njengoba kushiwo ngaphambili, ukwehluleka kwe-testosterone kuphakeme ekugugeni kusukela lokhu kukhiqizwa kwamahomoni ezocansi kuya kwehla. Ngakho-ke, i-Proviron ibilokhu isibusiso kubo bonke abantu abangenamandla nokungasebenzi. Ngakolunye uhlangothi, i-Proviron ingakwazi ukuguqula izimpawu ze-hypogonadism ezingase zihlanganise i-libido ephansi, ukukhiqizwa kwe-sperm ephansi, ubukhulu bamathambo, nokunciphisa umzimba kwe-muscle. Ezinye izifo zingase ziqhekeze imisipha yakho, kanti udokotela wakho uzobe esebenzisa ukusetshenziswa kweProviron. Kuzo zonke lezi zimo, lesi sidakamizwa sizoletha kuphela imiphumela yekhwalithi uma ilawulwa kahle. Uma unesinye isimo sezokwelapha ekwelapheni, xelela udokotela wakho ukuba agweme ukubhekana nemiphumela emibi.
I-Proviron yisezela eyaziwa kakhulu ekwakheni umzimba njengoba kusiza abasebenzisi ukuthi bajabulele izinzuzo ezingcono kakhulu ze-anabolic steroids. Abaningi bomzimba bahlanganisa i-Proviron emijikelezweni yabo yokugwedla noma yokusika. Lesi sidakamizwa sithuthukisa umzimba jikelele weprotheni emzimbeni, ngaleyo ndlela kukhuthaza ukukhula kwemisipha. Kubanikazi bomzimba abenza umsebenzi omkhulu obunzima, imithi ibasiza ukuba bathole imisipha enzima futhi eqondile ekupheleni komjikelezo wokugwedla noma wokusika. Ukufakwa kwe-stacking kuyinto evamile ekwakheni umzimba futhi kusiza abasebenzisi ukuthi babone imiphumela efunayo ngaphakathi kwesikhathi esifushane kunokwenzeka. Ezinye i-steroid esisodwa emzimbeni ziguqulwa zibe yi-estrogen, futhi i-Proviron idlala indima ebalulekile ekuvimbeleni le nqubo. Ngakolunye uhlangothi, i-steroid yenza ama-hormone e-testosterone asebenze ngokukhululekile emzimbeni, ngaleyo ndlela eqinisekisa imiphumela yekhwalithi efana nokuthuthukiswa kwemisipha ephilile kubo bonke abakhi bomzimba.
I-Proviron ifana ne-DHT, futhi ibuye ibe nemiphumela efanayo efana nokuqinisa ubunzima be-muscle nokuthuthukisa amandla omzimba jikelele okwenza abagijimi bakwazi ukuncintisana ngempumelelo. Ngokuvamile, lo muthi ukwandisa ukusebenza komdlali osembili ngesikhathi sokusebenza nasemincintiswaneni yesikhathi sangempela. Kwezinye zezemidlalo lapho amandla namandla omzimba, i-Proviron yenza kahle. Izindaba ezinhle ukuthi i-Proviron ibonakala kuphela kumaviki angu-6 ngemuva kokuqedela umjikelezo wakho. Ngakho-ke, udinga nje ukuthola isikhathi sakho sokulungile, futhi wenza kahle ngisho nasemidlalweni engakhuthazi ukusetshenziswa kwe-steroids.
Isidakamizwa esiphephile esibindi sakho
Nakuba i-Proviron yisidakamizwa somlomo, akuyona into enobuthi ku-isibindi sakho, futhi lokho kuyenza phakathi kwe-steroids ephephile emakethe. Abasebenzisi abaningi be-steroid abakhululekile ngama-injection avamile. Ngakho-ke, ungasebenzisa amaphilisi e-Proviron futhi ujabulele izinzuzo. Ngenxa yokuntuleka kwe-testosterone, i-Proviron inikeza isisombululo esihle kunabo bonke abancane nabadala. Ungasebenzisa futhi lesi sidakamizwa ndawonye namanye ama-anabolic steroids, futhi ngeke uhlangabezane nemiphumela emibi kakhulu kakhulu esibindi sakho.
9. Ukubuyekeza kwe-Proviron
Njengamanye ama-steroids emakethe i-Proviron ithole ukubuyekezwa kwamakhasimende ahlukahlukene ngamunye enikeza imibono ehlukene ngokuhlangenwe nakho kwabo nomuthi. Abanye abantu babika imiphumela emihle kakhulu ngakho-ke iziguli ezihlushwa ukungabi namandla nokungasebenzi. Ezweni lezokwelapha, i-Proviron bekuyisidakamizwa esiphezulu futhi isilethe imiphumela yekhwalithi. Ngakolunye uhlangothi, abagijimi namalungu omzimba banikeza izidakamizwa ezihle kakhulu. Iningi labantu abasebenzisa i-Proviron banelisekile ngekhono layo lokubasiza ukuba bathole imigomo ehlukile. Abadlali abavela emincintiswaneni ehlukene bangasebenzisa i-Proviron ukuthuthukisa amandla omzimba jikelele futhi ekugcineni bathuthukise ukusebenza kwabo.
Ukubuka ezihlukahlukene I-Proviron Izibuyekezo, ungatshela ukuthi iningi labadlali abajabule nalo muthi. Ngokuqondile, ikhono lomuthi lokunyamalala ohlelweni lomzimba kungakapheli isikhathi esincane kunokwenzeka futhi udunyiswe abasebenzisi abaningi. I-Proviron yanyamalala emzimbeni ngemuva kwamaviki angu-6 okwenza kube usizo olungcono kubadlali ababambe iqhaza emincintiswaneni abavimbele ukusetshenziswa kwe-steroids. Ngesikhathi esifanele, usengasebenzisa i-Proviron futhi uhlanganyele emncintiswaneni wakho olandelayo ngokunethezeka.
Kodwa-ke, abanye abasebenzisi bakhononda ngokubhekana nemiphumela emibi emva kokusebenzisa izidakamizwa ezifana nokukhanda ikhanda, ukuvinjelwa isikhathi eside nokukhula okunamandla kubasebenzisi abasha. Izidalwa zabantu ziyinkimbinkimbi, yingakho abantu bahlangabezana nemiphumela ehlukene kokubili okungalungile nokuhle. Imiphumela emibi ye-Proviron ingalawulwa ngokuthatha isilinganiso esifanele. Ungaxhumana nodokotela wakho uma uqala ukuthola imiphumela emibi ukukusiza ukuthola isisombululo. Ezweni le-steroid, akuwona wonke umuntu ozothola imiphumela emihle, kodwa iningi lemiphumela emibi libangelwa i-Proviron yokudlula.
10. I-Proviron ethengiswayo
Njengamanje, kunabathengisi abaningi be-Proviron emakethe, ngakho-ke kudingeka uqaphele kakhulu lapho uthenga umuthi. Kufanele uhlale ukhumbule ukuthi kuphela i-Proviron yekhwalithi engakuqinisekisa ngemiphumela yekhwalithi. Konke into yedijithali, futhi ungakwazi kalula buy I-Proviron powder kwiwebsite yethu. Esikhathini esifundeni, singumkhiqizi we-Proviron omuhle kanye nomphakeli. Ama-ejensi ajwayelekile ejwayelekile emhlabeni avumele yonke imikhiqizo yethu, futhi awunakho ukukhathazeka mayelana nokwenza i-oda yakho. Senza ukudiliva okufike ngesikhathi ukuqinisekisa ukuthi uqala isilinganiso sakho ngesikhathi esifanele. Ungathenga futhi i-Proviron powder kusuka kuwebhusayithi yethu.
Kuhlale kunconywa ukwenza ucwaningo lwakho kuma-Proviron abathengisi abatholakalayo. Akuwona wonke umthengisi oyitholayo emakethe angathembeka. Abanye bakhona ukuze benze imali, futhi abakhathaleli ngenhlalakahle yakho. Bheka ukubuyekezwa kwamakhasimende ahlukene, uwahlaziye ngaphambi kokwenza isinqumo sakho sokugcina Umhlinzeki we-Proviron ukuthembela. Sinewebhusayithi evumelana nomsebenzisi evumela ukuthi uqondise kalula kusuka komkhiqizo owodwa kuya kwesinye futhi wenze i-oda lakho ngemizuzwana. Ungathenga i-Proviron ngobuningi noma nje ngokwanele ukuze uthole isilinganiso sakho.
Futhi, hlola imithetho yezwe lakho ukuhlola ukuthi bayabekela yini abanakho, ukungenisa noma ukusebenzisa i-Proviron. Amazwe asebenza ngaphansi kwemithetho ehlukene, futhi asifuni ukubeka amakhasimende ethu enkingeni ngokuthenga imikhiqizo yethu yekhwalithi. Ngokwesibonelo, e-USA, ukusebenzisa i-Proviron noma ifa kungabhekwa njengecala. Lokhu kusho ukungenisa, ukuthengisa noma ukuthenga i-anabolic steroids kanye neProviron yisenzo sobugebengu. E-UK, i-Proviron isemthethweni ekusetshenzisweni komuntu siqu noma ngefa futhi futhi ukungenisa izidakamizwa nakho kuyomthetho. Umthetho ofanayo usebenza eCanada kodwa ukuhweba izidakamizwa ubugebengu obungadonsela izinhlawulo ezinkulu, isigwebo sejele noma bobabili. Unganqikazi ukusibiza noma nini lapho udinga usizo, noma unemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu.
11. I-proviron ye-Bodybuilding -Sommary
I-Proviron isetshenzisiwe yizici eziningi zomzimba kokubili imijikelezo yokusika neyokukhipha kanye namanye ama-anabolic steroids. Izinsiza ezidakamizwa ekuthuthukiseni imisipha enzima futhi ecike kakhulu ikakhulu uma ihambisana nokusebenza okulungile nokudla. Indima ephambili ye-Proviron ukwandisa amandla we-steroid emzimbeni wakho, yingakho abaningi abaphumelela emzimbeni bafaka phakathi kuwo wonke umjikelezo wabo. Isidakamizwa sinikeza futhi ama-hormone e-testosterone inkululeko yokusebenza emzimbeni wakho, ngaleyo ndlela ukwandisa noma yimiphi imiphumela ye-anabolic steroid. I-Proviron inobumbano obuphezulu kakhulu bokubopha nge-enzyme ye-aromatase, futhi abasebenzisi be-anabolic steroid bangayisebenzisa njengendlela yokushintsha i-aromatase.
Ngakolunye uhlangothi, i-Proviron yisidakamizwa esaziwayo esibopha kahle nge-Sex Hormone Binding Globulin, okunciphisa ukujikeleza kwe-testosterone emzimbeni wakho. Yingakho abanye abakhi bomzimba bakhetha ukusebenzisa umuthi ngesikhathi se-PCT. Kodwa-ke, ekwakheni umzimba u-Proviron wedwa akakwazi ukuhambisa imisipha yekhwalithi ngaphandle kokuthi ihlanganiswe namanye ama-anabolic steroids evelele. Lesi sidakamizwa siyaziwa ngezindawo zayo ezilukhuni ze-muscle futhi sithuthukisa amandla omzimba okulungele ukuzivocavoca futhi phakathi nemincintiswano. Namathela esilinganisweni esitshelwe udokotela wakho ukuze ugweme izinkinga. Ukwehliswa kwesilinganiso kungase kube nemiphumela emibi noma kukuvimbele ekufinyeleleni imigomo yakho.
UDe Souza, GL, & Hallak, J. (2011). I-steroids yama-anabolic kanye nokungabi nabesilisa: ukubuyekezwa okuphelele. BJU international, 108(11), i-1860-1865.
Angell, PJ, Green, DJ, Lord, R., Gaze, D., Whyte, G., & George, KP (2018). Izimpendulo ezithinta inhliziyo ezinomsoco ekusebenziseni ukuvivinya abasebenzisi be-anabolic steroids: Ukuphenywa kokuqala. Isayensi nemidlalo, 33(6), i-339-346.